IZIMVO ZETV ZANGAPHANDLE (UYILO LWEGALARI) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Izimvo zeTV zangaphandle (Uyilo lwegalari)
Izimvo zeTV zangaphandle (Uyilo lwegalari)
Yenza elona xesha liphezulu lokuphila ngaphandle kwezi mbono ziyilelayo nezisebenzayo ngaphandle kweTV. Ayaneli nje ukubonelela ngendawo yokongeza iindwendwe, kodwa ikwindawo entle yokukhuthaza usapho lwakho ukuba lonwabele ivithamin D efunekayo, umoya omtsha kunye nembono entle.
Njengolwandiso lwegumbi lakho lokuhlala, kutheni uyema kwifenitshala. Inyama yenkomo kunye nokuzonwabisa okubonwayo kunye nokubonwayo ukuqhubela phambili ukuzisa intuthuzelo yendawo yakho yokuhlala yangaphakathi kwiindawo zakho zangaphandle.
Ungalitshintsha njani igama lakho eFlorida
Isikrini esikhulu esihambelana neesandi ezijikeleze isandi yindlela elungileyo yokuhlaziya ipatio yakho, ipaki, igadi, okanye indawo yokubhukuda, ngendlela enkulu. Kodwa, ngetekhnoloji yanamhlanje, ukuzisa intuthuzelo yeendawo zakho zangaphakathi eyadini lakho akukaze kucingelwe kwaye kube lula. I-Smart TV, umzekelo, yenza ukuba kube nokwenzeka ukulawula useto lokujonga njengemiyalelo yelizwi okanye usetyenziso lweselfowuni.
Ukongeza, ukubeka iTV yakho kulula kakhulu. Ngombulelo kwii-HDMIs ezingenazingcingo, iBluetooth, kunye noseto olungenazingcingo, awunakukhathazeka ngeentambo ezibonakalayo. Kwaye kunye neeTV ezinesikrini seflethi kunye neeprojektha ezikumgangatho ophezulu, uyilo lwangaphandle olunokubakho alunasiphelo.
IPatio egutyungelweyo ngeTV
Umabonwakude ngaphandle kwiNdawo yeBarbecue
Indawo yomlilo yangaphandle ngeTV
Ibha yangaphandle yeKhaya ngeTV
IPatio ephahleni kunye neTV
Indawo yokubukela imovie yangaphandle
Indlu yeephuli eneProjektha yeTV
Umabonwakude wangaphandle uqhotyoshelwe kwindlu
Uyikhusela njani imozulu ngeTV ngaphandle?
Ipatio yanamhlanje enentaba yeTV engaphandle ngaphakathi kwepergola
Khusela i-TV yakho kwimozulu nakubumanzi ngokubonelela ngekhabhathi yeTV evaliweyo. Uyilo lwepatio lusebenzisa indawo ebambekayo yekhonkrithi yokugcina umabonwakude ngaphandle. Ukuvalelwa kwekhonkrithi kuhamba kakuhle kuyilo lwepatio iyonke, kunye nezinto zalo ethe tyaba, kwaye isebenzisa izinto ezifanayo zepatio. Inkqubo ye- ipatiyo yanamhlanje Inendawo efanelekileyo
Le patio igqunyiweyo yindawo emnandi yokonwabela ukubukela ukutya kunye nosapho. Kukulungele ukutya okanye ukuzonwabisa ngeCawa emva kwemini.
Ukufaka isikrini sakho sangaphandle seTV ngaphezulu nje kwendawo yokubasa umlilo kudala indawo ekugxilwe kuyo. Ukongeza, ukufakwa ngokulula kwescreen seflats phezu kwendawo yomlilo ngaphandle kokuhonjiswa okongeziweyo kunceda ukugcina isitayile sangoku.
UKUYA Umgangatho wale mihla phakathi kwendawo eluhlaza engqongileyo iyathandeka njengoko injalo, kodwa ngeTV yangaphandle okanye isikrini seprojektha, ungazisa okungakumbi kwindawo yakho yokuphumla. Iiflatscreen zenza kube lula ukunyuka naphina kwindawo yakho yepatio okanye kumgangatho wedesika, kodwa iprojektha ikwindlela efanelekileyo xa ufuna isikrini esikhulu.
Bhanganisa indawo yakho yangaphandle yebarbecue kunye nescreen seTV, kwaye uyakufumana indawo ye-hangout engenakuphikiswa kwaye awusayi kuphinda uphulukane namaxesha okuphumelela ngelixa ugrill. Le TV ikwiflethi eneflethi enendawo efanelekileyo yokusasaza bukhoma imidlalo oyithandayo okanye iinkqubo zeTV.
Gcwalisa ukuzonwabisa kwakho kwangaphandle ngesithethi esingqonge imozulu ukomeleza amava akho angaphandle okujonga inotshi.
Igumbi losuku yenye indawo efanelekileyo yeTV yakho enyusiweyo njengoko inokwenzeka kwaye ikhuselekile ukubeka isikrini sakho esikhulu. Akukho sidingo senguqulelo yemozulu kwiTV yakho, okoko i Ipatio evaliweyo Indawo ikhusela izixhobo zakho zokumamela nokubukela ngelixa usonwabela iimbono kunye nokukhanya kwendalo okungaphandle.
Ukubeka iscreen sakho seTV kwisakhelo sakho somlilo kuphucula igumbi lokutsala eliphakathi. Ikwayindawo efanelekileyo yokubekwa kuba izalisa ukungabikho komhlaba omkhulu. Unokwandisa indawo yakho yokucima umlilo okanye indawo yokufihla umlilo emacaleni ukuze wenze indawo engenamda kwintambo efihliweyo kunye neentambo.
Ilitye elimangalisayo lokufaka kule ndawo yindawo yangasemva efanelekileyo yexesha lakho lokujonga iTV. Ngaphandle kwamathandabuzo eyona ndawo kugxilwe kuyo ngaphandle, ukubekwa kweTV kwisambatho, kuyenza ibonakale ngakumbi kwaye ivumela ababukeli ukuba bonwabele umbono opheleleyo naphi na apho ukhoyo kwipatiyo egadini egutyungelweyo. Bona Okuninzi izimvo zepatio zamatye Apha.
Ngomgangatho ophantsi, ukubeka isikrini seTV kunokuba ngumceli mngeni omkhulu. Yenza iimbono ezingaphazanyiswanga zommandla ngokukhetha umabonwakude onobungakanani obaneleyo bokujonga kude.
Indawo evutha umlilo yenza ubusika obubandayo basentwasahlobo nasekwindla bube mnandi ngakumbi. Njengoko iyasebenza, indawo yokubasa umlilo ibisoloko iyeyona ndawo kugxilwe kuyo ngaphandle, kodwa ukufaka umabonwakude lulongezo olonwabisayo ukwenza ubomi bakho bangaphandle bube mnandi ngakumbi.
Izinto zokufumana i-Cabana kukuba unganako ukongeza izinto ezingaphezulu ezinje ngeseti yesofa engaphandle, ikhitshi kunye nendawo yokutyela. Ngokukhuseleka okongeziweyo ngokuchasene nezinto, ukhululekile ukufaka esi sikrini sikhulu ubusoloko usifuna.
Ingxangxasi enkulu ehla ukusuka eluphahleni lwendlu yangoku, yintoni enye onokuyicela? Ewe, unokufumana iTV yangaphandle. Umabonwakude onyusiweyo ugqibezela lo mmandla ungaphandle omangalisayo, into efanelekileyo egqibezela le Zen yangaphandle yokuphumla. Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi iipatio ezinamanzi .
Ukuzipholela ngeeyure zokuzonwabisa akukaze kugqitywe ngaphandle kokujonga umboniso wakho owuthandayo kwisilingi seTV eflethiweyo yesikrini.
Ukufaka ukubeka esweni umabonwakude akufuneki kube nzima. Ngesakhiwo sesandi, i-cabana yakho yindawo efanelekileyo yokubeka isikrini sakho esicaba.
Xa unenkqubo yesandi ebalaseleyo yangaphandle yokutshatisa, ngoku ungonwabela iphuli yegadi yakho engaphandle ngelixa umamele umculo owuthandayo ecaleni kwangaphandle indawo yokubasa igesi .
Ibha yasekhaya yangaphandle sisivumelwano sokuba izinto zangoku xa ziyilwe kakuhle zinokuhamba kakuhle nezinto zakho zakudala. Umabonwakude omkhulu ubekwe ngokugqibeleleyo kwisill kunye nokubumba kwamazinyo kwaye yenziwe kakuhle ngomthi we-rustic, uhambelana nesimbo seediliya. Ngoku, ungonwabela ukutya kunye neziselo ezishushu okanye ezibandayo ngelixa ujonge imovie yakho oyithandayo okanye iinkqubo zeTV ebharini.
Ngombono omangalisayo kunye noyilo olunolwazi oluninzi yintoni enye onokuyicela kule patio yophahla kunye neTV? Kuba izikrini ezithe tyaba zilula kwaye azizukuthatha ndawo ininzi, ungayifaka ngokulula naphi na. Kukwalumkile ukufaka uphahla. Kwinto yanamhlanje ejijekileyo uphahla olunophahla olumhlophe luya kujongeka lulungile nakweyiphi na indawo ephahleni kwaye isebenza njengoluhlu olongezelelekileyo lokukhusela umabonwakude wakho wangaphandle.
Ukuba unendawo enkulu yasemva kwendlu, umabonwakude uluncedo olukhulu kubantwana bakho ukuba bajonge abalinganiswa babo abathandayo bekhathuni okanye babukele nemiboniso yezemfundo. Unokukhetha iprojektha okanye umabonwakude ongaphandle kwaye usebenze ngexesha lokulala labantwana. Ngokufaka ingca eyenziweyo ngaphaya kwepatio umntu unokwenza indawo entle yokubeka ingubo okanye iibhegi zokulala ebusuku.
Gcwalisa ukuzonwabisa kwakho ngasemva ngokufaka i-TV yakho yangaphandle phantsi kwepergola yakho. Ngeempawu ezintle, le ndawo yolonwabo yehlobo kunye nendawo ye-hangout ikulungele ukonwabisa iindwendwe.
Indawo ebekwe kumanqwanqwa kumabonakude ngaphandle kukhetho olusebenzayo xa ufuna ukuhambisa iscreen sakho sokubukela ujikeleze ipatio yakho kwaye ufumane indawo efanelekileyo yokubukela. Le pergola yeklasikhi yindawo yothando ukonwabela isidlo esithuleyo kunye nezinye zakho ezibalulekileyo.
Uncedo lokukhutshwa kweprojektha yeTV kukuba ayisindi kwaye akufuneki ukuba ukhathazeke ngazo naziphi na iipali eziwayo zakuba nje zifakiwe. Le ndlu inamachibi enomtsalane yenza uninzi lwophahla lwayo olungaphaya, njengoko ikhusela ngokufanelekileyo isikrini sokubukela.
Kwisithuba sedesika esingatyhilelwanga umntu unokuthenga umabonwakude ongaphandle onempawu zemozulu. Kwezinye iimeko ukufumana eyona ndawo ibalaseleyo kumabonwakude wakho ngaphandle kunokuba ngumceli mngeni. Unethamsanqa ukuba unophahla olude ngaphezulu, njengale ndawo yomgangatho, osebenzise indawo yayo yekona kunye nentaba ye-tv ejikelezayo. Ngale ndlela unokuhlengahlengisa umabonwakude kwi-engile yokujonga oyithandayo.
Zininzi iimodeli zangaphandle zeTV phaya, kodwa akukhathaleki nokuba leliphi ixesha lonyaka, uyakufuna ukhuselo olongezelelekileyo ukuqinisekisa ukuba umabonwakude wakho wangaphandle ungena kwimozulu.
Uluhlu lokhuselo kwizikrini zakho ezinkulu likuvumela ukuba ukonwabele ukujonga kwakho ngaphandle unyaka wonke. Ngokuqinisekileyo, awufuni ukuba izilwanyana zasendle zonakalise iziko lakho lokuzonwabisa okanye ukuba nosomashishini basekuhlaleni bathabathe utyalo-mali lwakho. Ukujongana nemozulu ngeTV yakho kuya kukwenza ukhululeke njengoko ufumana ukhuseleko kunye nokhuseleko kumabonakude wakho wangaphandle. Funda ngakumbi malunga neengcebiso ze kubeka iTV ngaphandle Apha.
Iindlela zemozulu yakho yeTV:
Indawo ebiyelweyo yeKhabinethi : Ukwenza ikhabhathi eyakhelwe-ngaphakathi enikezelwe kumabonwakude wakho wangaphandle ikuvumela ukuba ufumane ubungakanani obuchanekileyo kwiindawo ezichanekileyo. Ungayenza ngokwezifiso ngokokhetho lwakho.
Uhlobo lwekhabhinethi lukuvumela ukuba ube nendawo eyongezelelweyo ngaphantsi okanye ukhethe ukuba neengcango zepokotho okanye ukuphakamisa i-flip ezingabonakalisa nokufihla isikrini sakho seTV. Umkhondo okanye iingcango ezityibilikayo ziyasebenza xa ufuna ukubukeka okucocekileyo kunye nokwangoku kwikhabhinethi yakho evaliweyo.
Eziluncedo: Unokutshatisa isimbo sangaphandle sokuyila okanye umxholo, ukugcinwa okungaphezulu, uLwakhiwo lweSandi, uKhuselo olupheleleyo
Bendlela: Ixabiso, kuthatha ixesha ukwakha
Thenga ukuBiyelwa kweTV yangaphandle : Kukho iindawo ezininzi zokuthengisa zeTV onokuthi ukhethe kuzo. Ezona zinto zidume kakhulu zi-shatterproof, locks, kunye ne-UV protection.
Eziluncedo: Ezahlukeneyo, uKulula ukufakwa
Bendlela: Ixabiso elininzi
Thenga ikhuselo leTV elingenaMozulu : Iyafumaneka kwezorhwebo, isiciko sikamabonwakude esingaphandle siyindlela ekhawulezayo nelula yokukhusela isikrini sakho. Unokukhetha i-antistatic copolymer enomgangatho ongcono ngaphezulu kwezembozo ze-vinyl. Kukwakho nezigqubuthelo zempawu ezingaphambili, eyakhelwe-ngaphakathi ecacileyo ifilimu egqunywe ngokupheleleyo ezantsi, kunye neenguqulelo ezinganyangekiyo.
Eziluncedo: Ukufikeleleka, ukuKhawuleza, ukuKhanya
Umxhasi: Izinto zokunciphisa ixesha elongezelelweyo
Yakha uLwakhiwo oluCwangcisiweyo Nangona ungazukufumana ukhuseleko olupheleleyo olufunekayo, isakhiwo esigutyungelweyo njenge-pergola, i-trellis, ikhava yepatio, kunye nendlu yeephuli inokusebenza njengokhuseleko lwesibini lweTV yakho yangaphandle.
Eziluncedo: Indawo eyongeziweyo, ubume besandi
Bendlela: Ixabiso, ufuna indawo eyongezelelweyo
Yise kude : Ukuzisa intuthuzelo yegumbi lakho lokuhlala kwindawo engaphandle yeyona ndlela ilungileyo yokongeza ixabiso kumgangatho wedesika okanye kwindawo yepatio. Kodwa umahluko kukuba yonke into kufuneka ingabinayo imozulu. Ukusuka kwimilo yakho yokuphosa kwindawo yakho yokulala, khetha izinto ezinokumelana nemitha ye-UV kwaye ezinokumisa umoya ngokukhawuleza xa zithambile.
KwiTV yakho, imodeli yangaphandle lolona khetho unokukhetha kulo, nokuba uya kuyifaka kwindawo egutyungelweyo okanye evulekileyo. Yongeza indawo ebiyelweyo kwiTV yakho ukhuseleko olongezelelekileyo kwizinto. Ungayifumana okanye uyicwangcise okanye u-odole indawo evaliweyo yeTV. Uncedo lwe-bespoke eyenziweyo kukuba unokwenza ngokusesikweni uyilo ukuba luhambelane nomxholo wakho wangoku ongaphandle.
Ukwenza uyilo lwakho kukho ezininzi Iinkqubo zoyilo lomgangatho Ungayisebenzisa ukuzisa izimvo zakho ebomini.
Iimveliso zoKhetho eziGqwesileyo zeSofa yeWicker yangaphandle ... $ 678.24 umthengisi ogqibelele (289) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zoKhetho eziGqwesileyo ezingama-30,000 zeBTU yoMlilo weRhasi… $ 249,99 umthengisi ogqibelele (602) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Isakhiwo sePatio Sofa i-4pcs Ifanitshala yangaphandle… $ 305,99 umthengisi ogqibelele (769) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ihlobo elingapheliyo GAD1401M LP Irhasi T… $ 317.70 umthengisi ogqibelele (553) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
r kunye b uthando iingoma zomculo
Umama womyeni plus iisuti zeepant zesayizi
unxibe ntoni kumtshato ofanayo
ilokhwe yomtshakazi emfusa negolide